Madax weynihii hore ee kooxda barcelona ahna musharax u taagan xilka barcelona Joan Laporte oo ka hadlay xalka lagu heyn karo messi. Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Madax weynihii hore ee kooxda barcelona ahna musharax u taagan xilka barcelona...
Madax weynihii hore ee kooxda barcelona ahna musharax u taagan xilka barcelona Joan Laporte oo ka hadlay xalka lagu heyn karo messi.
Barcelona waa inay ku guuleysato koobab si ay u sii haysato Messi hadii kale waxa uu ku biiri doonaa kooxaha xiiseynaya oo ay ugu horeeyaan manchester city iyo kooxda paris Saint chermain oo ah kooxdii markale ku riday niyad jabka kadib guul daradii xalay kasoo gaartay PSG ciyaar ku dhamaatay 4-1.
Barcelona waa inay ku guuleysato koobab hadii ay tahay inay ka dhaadhiciyaan Lionel Messi inuu sii joogo, ayuu yiri madaxweynaha hore ee barcelona Joan Laporta oo hadana ku jira tartanka inuu noqdo madaxweynaha cusub oo la qaban doono bisha Maarso sideedeeda Rajada barcelona ayaa ah mid naadir ah soo laabashadeeda waa mid adag messi ayeeyna markale buuq la geli doonaan barcelona dhanka bixitaanka.
Messi, oo isku dayay inuu ka tago Camp Nou xilli ciyaareedkii hore ayaa la filayaa inuu u sii gudbo Paris ama Manchester City dhamaadka sanadka laakiin Laporta wuxuu rajeynayaa in qalab badan oo dahab ah ay ku sii hayn karaan gurigiisa muddada dheer.
Previous articleKooxda Sevilla oo xiiseyneysa xidiga Liverpool Takumi Minamino.
Next articleReal madrid oo xiiseyneysa daafaca kooxda Braga David Carmo.